Ayaa U Baahan David De Gea Marka Aad Goolhaye Pual Pogba Haysato- Arintii Qariibka Ahayd Ee Pogba Oo Baraha Bulshada Loogu Karbaashay. - Gool24.Net
Ayaa U Baahan David De Gea Marka Aad Goolhaye Pual Pogba Haysato- Arintii Qariibka Ahayd Ee Pogba Oo Baraha Bulshada Loogu Karbaashay.
Pual Pogba ayaa la kulmay arin waji gabax ah kadib markii uu sida goolhayaasha uu labada gacmood ku celiyay kubbad uu xidiga kooxda West Ham United ee Declan Rice uu darbo ugu tuurayay goolka United.
Pual Pogba ayaa baraha bulshada lagu karbaashay waxaana Man United loogu duur xulay in ay hadda xal u heleen dhibaatadii ka haysatay goolhaye David De Gea.
Waxay ahayd dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta Man United iyo West Ham United waxaana kooxda Hammers lagu abaal mariyay kubbad laaga xorta ah balse kubbada laysku taabtay ayuu Declan Rice si xoogan u darbeeyay waxaana labada gacmood oo awood leh kubbada ku joojiyay Pual Pogba.
Garsoore Paul Tierney ayaa markii ay ciyaartoyda West Ham United dalbadeen rekoodhe waxa uu xidhiidh la sameeyay garsoorka VAR inkasta oo uu si cad u arkayay waxa uu Pogba sameeyay.
Laakiin wixii uu garsoore Paul Tierney arkay iyo go’aanka VAR ayaa isku mid noqday waxaana West Ham United lagu abaal mariyay rekoodhe kaas oo uu gool u badalay Michail Antonio.
Waxa uu goolkani noqday goolkii ugu horeeyay ee uu Michail Antonio ku dhaliyay rekoodhe kulan Premier League ah ah inkasta oo uu soo ciyaara 388 kulan isla markaana uu xili ciyaareedkan soo dhaliyay 10 gool oo Premier League waana markii ugu horaysay ee uu heerka gool dhalintan gaadhay.
Laakiin Pual Pogba ayaa noqday waxa ugu badan ee laga hadlayay waqtigii nasashada iyo ilaa hadda kadib markii uu si aan la rumaysan karin qaabka goolhayayaasha uu labada gacmood kuubada ugu celiyay isaga oo u muuqday in uu ka fikiray in wajigiisa uu ka dhawrtay darbo xanuun badan oo kaga dhacaysay.
Iyada oo falcelinta jamaahiirta kubbada cagta ee dhacdada Pual Pogba aan la soo koobi karin, waxaa fal celin badan oo kale sameeyay warbaahinta kubbada cagta gaar ahaan kuwa England.
Aan soo qaadano qaar ka mid ah qoraaladii ay warbaahinta England ka sameeyeen dhacdada uu Pogba goolhayaha iskugu badalay waxaana ka mid ah TalkSport oo soo qortay: “Pogba waxa uu sii ogaa in De Gea aanu taas badbaadin karin, waa qashin isaga ka yimid, waa qashin!”.
ESPN ayaa bartooda twitterka iyaguna ku soo qoray: “Ayaa u baahan David De Gea marka aad haysato Pual Pogba” waxayna xidiga reer France ugu maadsadeen qaabka goolhayenimada leh ee uu kubbada lacagta gacmood sida xoogan ugu joojiyay.
Laakiin sidoo kale ESPN UK ayaa sawirka Solskjaer oo la hadlya David De Gea waxaa la soo raaciyay : “Waad ka aragtaa taas Pual ee jidhkiisa kubbada ka danbeeyay- isku laabitaanka xooganaa, wiilkaygii daawo oo wax ka baro”.
Troll Football oo ka mid ah meelaha twitterka ee maadaha ugu badan ka sameeya dhacdooyinka kubbada cagta ayaa lagu soo qoray: “Man United waxay ugu danbayn heshay jawaabta dhibaatadii goolhayahooda, waa Pual Pogba”.
Sky Sports ayaa markooda dhacdada Pogba ka soo qoray: “Muxuu Pogba ka fikirayay? Man United waxay danbaysaa waqtiga nasashada kadib markii uu kubbad gacan ku bixiyay rekoodhe”.
Intan ayaa ka mid ahayd kumanyaal fariimo iyo muuqaalo ah oo loogu maadsaday qaabkii uu Poul Pogba kubbada gacamaha ugu celiyay ee uu waliba dhulka ula dhacay markii uu joojiyay.